မန္တလေးမြို့၌ အသစ်ဖွင့်လှစ်လိုက်တဲ့ GAC Showroom
LS Automotive Group Myanmar (GAC Motor Myanmar) ရဲ့ ဒုတိယမြောက် Showroom ဖြစ်တဲ့ GAC Motor Mandalay Showroom ဖွင့်လှစ်ခြင်းအခမ်းအနားကို GAC ကားသစ်များဖြစ်ကြတဲ့ All New GS5Model နဲ့ All New GM6Model တို့ရဲ့ Soft Launch ပွဲနဲ့အတူ ဇွန်လ ၂၈ ရက်နေ့မှာ တစ်ပါတည်းကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
၎င်း Showroom နဲ့ Service Center ဖွင့်လှစ်ပွဲကို မန္တလေးတိုင်း ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာ ဇော်မြင့်မောင်နဲ့တကွ ဌာနဆိုင်ရာ လူကြီးမင်းများတက်ရောက်ချီးမြှင့်ပေးခဲ့ကြပြီး Showroom အသစ်ရဲ့တည်နေရာကတော့ အမှတ် (စ-၁/၃+၄) ၇၂လမ်း x ၇၃ လမ်းကြား ငုရွှေဝါလမ်းမကြီး (Mingalar Mandalay အနီး) ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်မှာ တည်ရှိတာပါ။
Soft Launch အနေနဲ့ မိတ်ဆက်ပြသခဲ့တဲ့ ကားအသစ် ၂ မျိုးကတော့ All New GS5နဲ့ All New GM6တို့ဖြစ်ပါတယ်။ GAC All New GS5ကတော့ Sporty SUV ဖြစ်ပြီး အထူးသစ်လွင်လှပတဲ့ ဒီဇိုင်းဖန်တီးမှု အသစ်နဲ့ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ ခရီးသည် ၅ ယောက်စီး SUV ပုံစံပါ။ All New Model ဖြစ်တာနဲ့အညီ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားတဲ့ 1 .5T Engine ၊ 150 hp အင်ဂျင်စနစ်၊ လုံခြုံမှုအဆင့်မြင့်မားတဲ့ High – Strength Steel ကိုယ်ထည်ဖန်တီးမှုနဲ့အတူအဆင့်မြင့်နည်းပညာများစွာလည်း ကြွယ်ဝစွာပါရှိတဲ့ Model ဖြစ်တဲ့အပြင် Sporty မောင်းနှင်ခြင်းကိုနှစ်သက်တဲ့ GAC ချစ်သူတွေအကြိုက် ထပ်တူကျမယ့်ကားဖြစ်မယ်လို့လည်း ဆိုထားပါသေးတယ်။ All New GS5ဟာ ကမ္ဘာကျော် C – NCAP ရဲ့5Star Safety Award ဆွတ်ခူးရရှိထားတဲ့ Model လည်းဖြစ်ပါတယ်။
GAC All New GM6ကတော့ မိသားစုသုံးအတွက် အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးနဲ့ ခံစားမှုပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ MPV Model ဖြစ်ပြီး မြို့တွင်း၊ နယ်ဝေးအသုံးပြုမှုများအတွက် လိုက်ပါစီးနင်းမယ့် မိသားစုဝင်အားလုံး ဘေးကင်းလုံခြုံ စိတ်ချမှုနဲ့ စိတ်လက်အပန်းဖြေခြင်းများကိုခေါ်ဆောင်စေမယ့် ကားတစ်စင်းလို့ GAC ကဆိုထားပါတယ်။ All New GM6မှာတော့ ကျယ်ဝန်းသပ်ရပ်တဲ့ ခရီးသည် ၇ ယောက်စီးပုံစံ၊ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် 1.5 T Engine ၊ 169 hp အင်ဂျင်စနစ်နဲ့အတူ ထူးခြားတဲ့ပါဝင်မှုများစွာကိုလည်း ထည့်သွင်းပေးထားပါသေးတယ်။ All New GM6ကတော့ ကမ္ဘာကျော် C – NCAP ရဲ့5Star Safety Award ဆွတ်ခူးရရှိပြီးသား Model လည်းဖြစ်ပါတယ်။
မိုးရာသီအတွက် သင့်ကားကို အသင့်ပြင်ဆင်ခြင်း
Myanmar Brilliance Auto Co.,Ltd. ရဲ့ Brilliance Auto Launching Event အခမ်းအနားကို Novotel Hotel Yangon Max ၌ကျင်းပပြုလုပ်